पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै देवचुली « Janata Samachar
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै देवचुली
प्रकाशित मिति : 12 September, 2018 8:11 am
नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीस्थित देवचुली डाँडा पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय देवचुली डाँडामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पदयात्राका लागि आउन थालेका छन् । देवचुली नगरपालिका–६ र बुलिङ्गटार गाउँपालिका–४ मा पर्ने सो क्षेत्रमा रहेका तीनकन्या माइको मन्दिर, गोलपोखरी शान्ति उद्यान र यहाँको मगर संस्कृतिले पदयात्रीलाई आकर्षित गर्न थालेको बुलिङ्गटार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण अधिकारी बताउँनुहुन्छ ।
नवलपुरको थारू संस्कृति तथा मध्यवर्ती जंगलमा बाघ, हात्ती, गैँडालगायत वन्यजन्तु हेर्नसमेत पर्यटक आउन थालेका छन् । देवचुली क्षेत्रको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका बारेमा प्रचार–प्रसार गरी सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देवचुली डाँडा पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष पदमराज गिरीले बताए । यहाँ समितिले एक हजार ९३६ मिटर अग्लो डाँडामा २३ फिट अग्लो भ्यूटावर निर्माण गरेको छ । उक्त भ्यूटावरबाट मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सहज भएको छ ।
पूर्वी नवलपरासीको एक मात्र पदयात्राका लागि उपयुक्त ठाउँ देवचुली डाँडालाई चिनाउन देवचुली नगरपालिका र बुलिङ्गटार गाउँपालिकाले संयुक्त योजना बनाउनु आवश्यक छ । ‘सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि मिलेर काम गरिरहेका छौँ,’ बुलिङ्गटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष शशीकिरण बास्ताकोटीले भन्नुभयो । देवचुलीबाट विभिन्न हिमशृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँ पदयात्राका लागि आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या अत्यधिक छ । यहाँ आउने बाह्य पर्यटकको संख्या न्यून छ ।
पर्याप्त प्रचार–प्रसार गर्न सके देवचुली डाँडा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ । देवचुली डाँडामा पूजालाई व्यवस्थित गर्न तीन कन्यामाइको मन्दिर निर्माण तथा खानेपानीका लागि फेदीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
मध्य रातमा गोली प्रहार, महिलाको मृत्यु
काठमाडौं । मध्य रातमा कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा गोली प्रहार भएको छ । गोली प्रहारबाट एक महिलाको
छोराको आशमा पाँचपटक गर्भपतन
काठमाडौं । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका १ सेमराकी जानकी यादवका तीन छोरी छन् । छोराको आशमा
आत्महत्या किन गर्छन ?
निरूपा प्रसून त्यतिबेला म १४ बर्षकी थिएँ । घरकी कान्छी छोरी भएकैले हुनु पर्छ अल्छि
८ कक्षा पढिरहेका बालकको प्रधानमन्त्रीलाई ३ सुझाव
काठमाडौं । सिन्धुली फिक्कलका भरत श्रेष्ठ १४ वर्षका भए । ८ कक्षामा अध्ययनरत उनले चिठीमार्फत
आज प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिन, कसरी मनाउँदैछन्…
काठमाडौं । प्रधानमन्धी केपी ओली आजबाट ६८ वर्ष प्रवेश गर्नुभएको छ । ६८ औं जन्मदिनको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले वृक्षारोपण गर्नुभएको…
२०७५ फागुन ११ गतेको राशिफल
मेषः व्यवसायमा राहत हुनेछ, काममा स्याबासी पाइनेछ । वृषः यात्रामा कष्ट हुनेछ, धर्ममा मन जानेछ । मिथुनः अवरोधको सिर्जना हुनेछ,…
बम बिष्फाेटका घाइतेकाे मेडिसिटीमा उपचार हुँदै
काठमाडौं । अज्ञात समूहले ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको गेटमा शक्तिशाली बम बिस्फोट गर्दा घाइते भएकाकाे मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे छ…
प्रचण्डबाट जनताको स्टुडियो उद्घाटन हुँदै
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार जनता टेलिभिजनमा आउँदै हुनुहुन्छ । शनिबार बिहान…
८ कक्षा पढिरहेका बालकको प्रधानमन्त्रीलाई ३…
काठमाडौं । सिन्धुली फिक्कलका भरत श्रेष्ठ १४ वर्षका भए । ८ कक्षामा अध्ययनरत उनले चिठीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पढ्दा लाग्छ,…
आईएस लडाकूसँग विवाहित महिलाको अनुभव
शिक्षकको मापदण्ड तोकियो, पाँचवर्षभित्र योग्यता पुर्याउनै पर्ने
ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा पतिपत्नीको मृत्यु
पत्नीको घाँटी काटेर प्रहरीचौकी पुगे कल्याण
कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा झडपः नेविसंघका नेता कुटिए
आज प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिन, कसरी मनाउँदैछन् ?
बोल्न नसक्नेमाथि बलात्कार
सवारी दुर्घटनामा शिक्षकको मृत्यु
बम विस्फोटका घाइतेको निःशुल्क उपचार
एनसेलको टावरमाथि आगजनी
जनता प्रसारण तथा प्रकाशन ‘नयाँ समाज निर्माणको महत्वपूर्ण अभियान’
राँगाको आक्रमणबाट मृत्यु